FAO ၏ စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းညွှန်းကိန်းမှာ မေလတွင် ၁၂ လဆက်တိုက်အဖြစ် စံချိန်တင်မြင့်တက် - Xinhua News Agency
ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံ မင့်စ်ခ်မြို့ပြင်ပရှိ လယ်ကွင်းတစ်ခုတွင် မုန်ညင်းပင်များ ရိတ်သိမ်းနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရောမ၊ ဇွန် ၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာ့စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းများမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကြောင့် ကုန်စည်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက် (supply chain) အပေါ် ရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်က ရှိခဲ့သည့်အဆင့်များထက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး မြင့်တက်ခဲ့ရာ မေလတွင်လည်း ၁၂ လဆက်တိုက်အဖြစ် စံချိန်တင်မြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (FAO) က ဇွန် ၃ ရက်၌ ထုတ်ပြန်သည့် အချက်အလက်အရ သိရသည်။
ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသ တောင်ဘက် Khan Younis မြို့တွင် ပါလက်စတိုင်း လယ်သမား Mohammad Naim က ၎င်း၏လယ်ကွင်း၌ ကြံစိုက်ခင်းကြီးထွားမှုကို စစ်ဆေးနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ယေဘုယျ FAO စားနပ်ရိက္ခာဈေးနှုန်းညွှန်းကိန်းမှာ ယခင်လထက် ၄.၈ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့ကာ မေလတွင် ၁၂၇.၁ ပွိုင့်အထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး မနှစ်ကထက် ၃၉.၇ ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြင့်လာခဲ့ကြောင်း၊ ညွှန်းကိန်း၏ အဓိကပါဝင်မှုများအားလုံးမှာလည်း တိုးလာကာ ကောက်နှံအစေ့အဆန်၊ ကောက်ပဲသီးနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီနှင့် သကြား ဈေးနှုန်းများမှာလည်း ဧပြီလအတွင်းရှိခဲ့သည်ထက် အနည်းဆုံး ၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အများဆုံးစားသောက်ကုန်များဖြစ်သော ကောက်နှံအစေ့အဆန်နှင့် ကောက်ပဲသီးနှံဈေးနှုန်းများမှာ မေလတွင် ၆.၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ပြောင်းဖူး၊ မုယောစပါးနှင့် ပြောင်းမျိုးနှံစားပင် ဈေးနှုန်းများမှာ ပိုမိုမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ဂျုံဈေးနှုန်းမှာမူ ပထမသီတင်းနှစ်ပတ်အတွင်း မြင့်တက်ပြီးနောက် မေလ၏ ဒုတိယလဝက်တွင်မူ ကျဆင်းလာခဲ့ကြောင်း၊ ဆန်ဈေးနှုန်းများမှာမူ တည်ငြိမ်နေခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကောက်နှံအစေ့အဆန်များနှင့် ကောက်ပဲသီးနှံဈေးများ အားလုံးမှာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း FAO က ပြောခဲ့သည်။
မေလအတွင်း ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် ၇.၈ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းမှာ အာရှဒေသတွင် ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းလာသဖြင့် စားအုန်းဆီ၊ ပဲပိစပ်နှင့် မုန်ညင်းဆီ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် သကြားဈေးနှုန်းများမှာလည်း ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် ထွက်ရှိသည့်ပမာဏလျော့နည်းလာပြီး ဈေးကစားခြင်းကြောင့် ၆.၈ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
FAO ၏ လစဉ် စားနပ်ရိက္ခာဈေးနှုန်းညွှန်းကိန်းများမှာ မတူညီသော ထုတ်ကုန် ၇၃ ခုအတွက် ဈေးနှုန်းများအားလွှမ်းခြုံထားသော စားသောက်ကုန်အမျိုးအစား ၂၃ မျိုးအတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ဈေးနှုန်းများအပေါ် အခြေခံထားပြီး အခြေခံနှစ်တစ်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ထား ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ညွှန်းကိန်းအား ဇူလိုင် ၈ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
FAO’s Food Price Index surges for record 12th consecutive month in May
Source: Xinhua| 2021-06-04 00:18:24|Editor: huaxia
ROME, June3(Xinhua) — World food prices surged in May, climbing forarecord 12th consecutive month as supply chain issues sparked by the coronavirus pandemic combined to push prices nearly 40 percent above levels fromayear earlier, according to data released on Thursday by the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO).
The monthly FAO Food Price Index is based on worldwide prices for 23 food commodity categories covering prices for 73 different products compared toabaseline year. The next index is scheduled for release on July 8. ■
1- A harvester reaps rapeseeds inafield on the outskirts of Minsk, Belarus, Aug. 5, 2020. (Photo by Henadz Zhinkov/Xinhua)
2- Palestinian farmer Mohammad Naim checks the growth of sugar canes at his farm in the southern Gaza Strip city of Khan Younis, on Oct. 18, 2020. (Photo by Khaled Omar/Xinhua)